Top 10 akanjo fampakaram-bady malaza indrindra 2022 - Victor Mochere
Rehefa mikasa ny hamatotra ny knot ianao dia zavatra iray no azo antoka - mila akanjo fampakaram-bady ianao. Azonao atao ny misafidy zavatra minimalistic sy tsotra mba hametrahana ny fifantohana amin'ny lanonana fa tsy aminao. Angamba ianao te hamerina zavatra tranainy avy amin'ny reninao mba hotazonina ho fomban-drazana. Na angamba efa nanonofy foana ny hamorona ny akanjo fampakaram-bady ho anao hatrany am-boalohany.
Efa vonona ny biraon'ny fihetseham-ponao ianao mba ho feno hevitra sy sary izay hanome anao ny fatran'ny aingam-panahy tena ilaina. Manomboka amin'ny fitaovana ampiasainao ka hatramin'ny firavaka hotafianao, maninona raha mitodika any amin'ireo olo-malaza sy ireo tarika mariazin'izy ireo? Azo antoka fa hahita zavatra manaitra ny masonao ianao ary hanampy anao hamorona ny akanjo nofinofinao.
Ireto ny top 10 akanjo fampakaram-bady malaza indrindra manaitra indrindra.
Akanjo fampakaram-bady izay nosoratanao rehetra
Tamin'ny fararano tamin'ny taona 2019, nanambady an'i Justin Bieber i Hailey Baldwin tamin'ny akanjo tsy misy soroka novolavolain'i Virgil Abloh ho an'ny Off-White. Ny akanjo dia nampifangaro ny fampakaram-bady nentim-paharazana tamin'ny akanjon'i Virgil Abloh. Nozairina tamin'ny perla teo an-damosin'ilay akanjo ny teny hoe “akanjo fampakaram-bady”, fa ny logo an'i Off-arrow White kosa dia natao peta-kofehy tsara teo amin'ilay akanjo. Ny fanjairana satroka rehetra amin'ny "TILL DEATH DO US PART" nozairina teo amin'ny moron-tongotry ny voalin'i Hailey dia vao mainka nampalaza azy.
Mifanaraka amin'ny toetrany feno fahasahiana, ny akanjo mariazin'i Gwen Stefani dia nofinofin'ny ampakarina rehetra. Noforonin'i Vera Wang, Stefani dia nanao akanjo georgette landy lily-fotsy manjelanjelatra miaraka amin'ny vozony mitsambikina, lamosina tapaka, bodice mipetaka ary zipo tulle avo lenta. Nofenoiny ilay endrika tamin'ny voaly fotsy miendrika trano fiangonana misy ny anaran'i Blake Shelton sy ny zanany telo lahy. Niova ho endrika vonona amin'ny fety kokoa i Gwen tamin'ny fandraisan'izy ireo ny akanjony, izay nahitana bodice corset sy zipo tulle fohy (mety ho an'ny dihy) voaravaka vorona dimy izay, araka ny filazan'ny mpamorona, dia maneho ny mpivady sy ny zanak'i Gwen.
Zoe Kravitz dia nisafidy an'i Alexander Wang mba hamorona endrika roa miavaka. Ny voalohany dia akanjo mitete amin'ny andilany miaraka amin'ny bodice mipetaka sy zipo tulle amin'ny kitrokely, miaraka amin'ny fehiloha tsipìka mahafatifaty sy kiraro kitten. Kravitz taty aoriana dia niova ho zipo ambany sy korset mitongilana. Resa-be ihany koa ny fitafian’ny fiaraha-misakafo fanaony ny alina nialoha ny fampakaram-badiny, satria nanao “short biker bridal” sahy nampiarahina tamin’ny akanjo crochet beade izy.
Nanao akanjo maro i Priyanka Chopra nandritra ny fankalazana, ny malaza indrindra amin'ireo dia ny akanjo Ralph Lauren natokana ho an'ny lanonana kristianina. Ny akanjo marevaka, izay nahitana perla be dia be, vakana kristaly ary firavaka kristaly Swarovski, dia vokatry ny asa mafy nandritra ny 1,826 75 ora. Ary tamin'ny fotoana niheveranao fa tsy ho be loatra ny fampakaram-bady, nanao akanjo couture misy voaly tulle XNUMX metatra i Chopra.
Ny akanjo fampakaram-bady an'i Sophie Turner dia noforonin'i Nicolas Ghesquière, talen'ny famoronana Louis Vuitton. Ny endrik'ilay ampakarina dia nahitana tanany lava dantelina, anoloana mitsambikina, lamosina misokatra ary lamasinina mikoriana. Nasiany voaly fohy voaravaka dantelina mba hamatotra tsara azy rehetra.
Ho an'ny fampakaram-badin'izy ireo Montecito, Ariana Grande dia nanao akanjo couture Vera Wang miaraka amin'ny silhouette tsanganana landy fotsy lily, fehin'ny empira, vozon'ny mamy vita sokitra, ary lamosina mitongilana. Mba hamenoana ny ensemble mahavaky aterineto azy dia nanao kavina diamondra Lorraine Schwartz ihany koa ny ampakarina ary voaly tulle fohy nasiana tsipìka satin.
Gwyneth Paltrow dia nanamboatra ny akanjony mariazy niaraka tamin'ny mpamorona Valentino Pierpaolo Piccioli. Izy io dia misy appliqués dantelina eo ambonin'ny lamba miboridana, tanany misy satroka ary lamosina lamosina. Nofenoin'i Paltrow tamin'ny voaly mirefy katedraly ny endriny rehefa nandeha teo amin'ny lalantsara izy.
Nanao akanjo Haute Couture Dior noforonin'ny talen'ny famoronana Dior Maria Grazia Chiuri i Kerr, izay nahazo aingam-panahy avy amin'ny akanjo fampakaram-bady malaza an'i Grace Kelly. Ny akanjo satin'i Kerr, izay nasiana lisy amin'ny lohasaha, dia endrika maotina amin'ny ankapobeny.
Noforonin'ny britanika couturier Giles Deacon, i Pippa Middleton dia nanao akanjo dantelina misy lamasinina feno tulle. Mba hamenoana ny endriny tsara tarehy amin'ny fampakaram-bady, dia nanao voaly Stephen Jones voaravaka perla, tiara Maidenhair Fern, ary kiraro Manolo Blahnik. Nisolo akanjo lava rihana faharoa ny ampakarina tamin'ny fandraisana ny takariva.
Ny endrik'i Markle manontolo amin'ny fampakaram-bady no be resaka indrindra amin'ny ensemble amin'ny 2018 - ary noho ny antony marim-pototra! Ho an'ny lanonana, ny Duchess of Sussex dia nanao akanjo silk-cady Clare Waight Keller miaraka amin'ny vozony bateau grafika. Ny nahafeno ny endriny dia ny tiara diamondra bandeau an'ny Mpanjakavavy Mary sy ny voaly 16 metatra miaraka amin'ny voninkazo voaravaka tanana, izay samy maneho firenena Commonwealth.
Na mitady zavatra manana endrika tsotra nefa kanto ianao na te hotsaroana noho ny fanararaotanao, dia ianao ihany no hamelona ilay akanjo rehefa mandeha eny amin'io lalantsara io ianao.